बजेट अभावमा आधा दर्जन सडकको निर्माण ठप्प | गृहपृष्ठ
Home समाचार बजेट अभावमा आधा दर्जन सडकको निर्माण ठप्प
on: January 27, 2018 समाचार
माघ १३, जितपुर (कपिलवस्तु) । बजेट अभावका कारण यहाँका आधा दर्जन सडक निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
उनले भने, ‘तीन वर्षको ठेक्का सम्झौता भएको छ, पहिलो चरणको भुक्तानी दियौँ, अब बजेट नै छैन कसरी काम अघि बढाउने ।’
अर्थ मन्त्रालयले आव ०७३/७४ मा २१ ओटा सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण गर्न रू. आठ लाखका दरले बजेट दिएको थियो । जसमध्ये छ ओटा सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनामार्फत ठेक्का लगाउन अर्थले सहमति दिएको थियो ।
सोहीअनुसार ठेक्का लगाई गत आव ०७३/७४ को रकम निकासा गरेको अर्थले यस आव ०७४÷७५ मा भने बजेट नै नछुट्याएपछि सडक निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
कार्यालयका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि प्राचीन तिलौराकोट दरबार जोड्ने कोइली–कोपवा–तिलौराकोटको आठ किलोमिटर सडक निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । सात मिटर चौडा कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि रू. १५ करोडमा अर्घाखाँची निर्माण सेवालाई ठेक्का दिइएको छ ।
तर ठेकेदार कम्पनीले २५ प्रतिशतभन्दा बढीको काम गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । आव २०७४ ठेकेदार सागर भुसालले अहिलेसम्म रू. चार करोडभन्दा बढीको काम गरिसके पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरे । रासस